Nezvedu - Quanzhou Stamgon Trading Co, Ltd.
Quanzhou Stamgon Trading Co Ltd. rave kuita bhizinesi mumachira kubvira1993. Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira mahombekombe akapfupi, zvipfeko uye Yoga pfeka etc. Misika yedu mikuru inowanikwa muEuropean, North America, South pacific uye Southeast Asia nyika. Tine mafekitari manomwe ekubatana-anoshanda ane vashandi vanopfuura 2300 vane hunyanzvi. Chigadzirwa chedu chekugadzira chinosvika mamirioni mazana maviri emadhora ekuAmerica pagore.
Isu takareba kwenguva refu tichishandira pamwe nevatengi vakaita seZara, K-musika, etc. Isu tinogamuchira nemwoyo wose shamwari dzinobva kupasi rese kushanyira fekitori yedu uye kukurukura bhizinesi nesu. "Pamusoro pevatengi vese sevanonyanya kukoshesa, kupa kwakanyanya sevhisi kune vatengi" ndiyo tenet yedu. Isu tichagara tawana kubatsirana kwenguva yakareba uye tinotarisira kuve vanobatsirana newe.
Pakutanga kumisikidzwa kwekambani, yakakanda timu inoshanda zvakanyanya uye inokwanisa manejimendi, yakatanga hurongwa hwekushandira zvirinani, uye yakaisa mari yakawanda mukuunzira mitsara yekugadzira michina, michina yekucheka, michina yekuparadzira uye zvimwe zvekutungamira michina. Mazuva ano, akasiyana-siyana emachina ekusona zvipfeko uye sublimation kudhiza zviwanikwa zviri nyore kuwanikwa. Iko kune matanhatu mitsetsetse mitsara yemisangano, makumi mana nesine-sindano uye matanhatu-waya makina michina, inobuda pamwedzi yezvidimbu zvinopfuura mazana mazana maviri.
Fekitori yedu ine vanopfuura zana zana nemakumi mairi, uye nyanzvi ine ruzivo QC inoitisa basa rekutarisisa panguva yekugadzirwa kwepakati uye isati yatumirwa, ive shuwa yekuchengeta yakakwira mhando kune vatengi.
Kuti titsigire madiki madiki kubva kuAmazon kana vamwe vadiki vekutengesa, takagadzirira zvakakwana senge dhiziro yega yega mune yekuchengetera inogona kuendeswa mukati memazuva akati wandei, tinokugamuchira nemufaro kushanyira kambani yedu kuti uenderere mberi nekukurukura kwebhizinesi kana zvichikwanisika.
ISPO Exhibition (2 / 86-01 / 07)
USA Mutengi Kushanya
Quanzhou Stamgon Trading Co, Ltd.